EBOOKS Library Archives - Afrikhepri Fondation
Chipiri, Nyamavhuvhu 3, 2021
kugashira Kategori EBOOKS LIBRARY
Chinese huzivi hunounza pamwechete mafungu ekufunga kubva kutsika nhatu: Confucianism, Taoism uye Buddhism. ChiChinese uzivi hwakatanga kare. Tinayo ...
Kubudirira Kwemabhuku Edzimba (PDF)
Kuvandudzwa kwemunhu chiunganidzwa chemifungo uye nzira. Chinangwa chayo ndechekuvandudza kwezvinogona uye kuzadzikiswa kwezishuvo. Dzvanya pane bhuku rekuvhura mu ...
Raibhurari yedhijitari (PDF)
Tine raibhurari yemabhuku edhijitari ekuverenga uye kugovana. Uku ndiko kusarudza kwatinotenda kuti kuchave kunobatsira kune vaverengi nevanoongorora. Dzvanya pane bhuku rekuvhura ...
Kamiti Revival Library (PDF)
VaKamite vanoenda kuruzivo, ruzivo rwakananga, nekuti asingazive kana anodzokorora dzidziso uye sainzi yevamwe haasi maKamite. Hatikwanise...
Library yeTheosophy (PDF)
Theosophical nzanga iboka risingabvumirane - rine zvibodzwa izvi: Kuumba musimboti wehukama hwehukama hwevanhu pasina kusiyanisa dzinza, zvepabonde kana ruvara Kurudzira kudzidza ...
ZveMweya haisi tsika yechitendero kana uzivi hwetsika. Icho chiitiko, chakazvimirira pane chero chitendero, chinamato kana dzidziso. Dzvanya pane bhuku rekuvhura muPDP ...
Imwe Mishonga uye Raibhurari yehutano (PDF)
Mumwe mushonga wakasiyana nemushonga wepamutemo. Iye anoshandisa acupuncture, homeopathy, naturopathy, mishonga yemakwenzi, osteopathy, psychotherapy, hypnotherapy, nezvimwe. Dzvanya pane bhuku kuti rivhure muPDF [mabhuku pasherefu ...
Zvakavanzika zveIkare Ekare Library (PDF)
Ejipita yekare, iyo nyika yezvakavanzika. Hakuna imwe budiriro yakabata fungidziro dzevanyanzvi uye vanhu vanofanana. Kwayakatangira, chinamato chayo uye masikirwo ayo makuru, matembere makuru, ...
Initiation Library (PDF)
Kutanga ndiyo nzira iyo mucheche anowana chinzvimbo chepamusoro chemweya kuburikidza nekuwana ruzivo uye kubvuma kune zviitwa zveruzhinji rwechitendero, nzanga yakavanzika kana ...
Zvemashiripiti uye Esoteric Raibhurari (PDF)
Zvemashiripiti (kubva ku Latin Latin occultus, "chakavanzika, chakavanzika") inorongedza zvese zvemashura zvemashiripiti nesainzi (alchemy, nyeredzi, mashiripiti, kushopera, mishonga yemashiripiti) inobata pazvakavanzika zvechisiko, chii chisipo ...
Dzidzo inokundikana painopa hunyanzvi kuhunyanzvi uye isingakwanise kugadzirisa kunetsana kwepfungwa. Dzidzo inofanira kubatsira kukura uye kufunga zvine hungwaru. Kukura hakusi ...
Zvekugadzirwa kwemasikisi, Unesco yakadaidza vatambi vane tarenda vanobva kunyika dzakasiyana (France, Madagascar, Nigeria, Kenya, Senegal, nezvimwewo). Tinya pabhuku kuti uvhure ...
Makirasi echiKristu cheEsoteric (PDF)
Esoteric chiKristu, chinozivikanwawo seyake herichic chiKristu kana chisinganzwisisike Chikristu, iri seti yemweya inotenderera inoona Chikristu sechitendero chechakavanzika, uye kutaura kuvapo uye ...
Page 1 pamusoro 2 1 2 zvinotevera